CO2 Laser fanamarihana Machine, Fibre Laser fanamarihana Machine - Feiquan
CO2 Laser fanamarihana Machine
Fibre Split Portable fanamarihana Machine
Manan-tsaina Integrated fanamarihana Machine
Tamin'ny laser fibre welding milina
Manan-tsaina nanamarika milina fampidirana
Laser Feiquan manome kalitao avo-indostria sy ny vokatra tamin'ny laser fitaovana tamin'ny laser teknolojia fanodinana tolotra.
Value vokatra sy ny tolotra, ary hanatsara ny vokatra foana ny fampisehoana sy ny kalitao
Ny maha samy hafa Continuous Laser Welding Ary Pulse Laser
Feiquan Laser Technology Wuxi Co., Ltd. dia avo-teknolojia orinasa ny manan-tsaina mifantoka amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny mahira-tsaina ny orinasa tamin'ny laser fitaovana. Noho ny asa fitoriana ny "tamin'ny laser fampiharana, asa fanompoana tsara kokoa ny fiainana", dia manohy manome mpanjifa maherin'ny andrasana. Value vokatra sy ny tolotra, ary hanatsara ny vokatra foana ny fampisehoana sy ny kalitao, dia nitombo lasa iray amin'ireo orinasa miavaka ao amin'ny orinasa mpamokatra entana indostrialy tamin'ny laser fitaovana ...
Manan-tsaina nanamarika tafiditra ...
Fibre nizara portable nanamarika milina
Aiza ny Business isan-karazany: Hatreto no nanorina prosy mpandraharaha rafitra any Alzeria, Ejipta, Iran, Afrika Atsimo, Inde, Malezia sy ny firenena Aziatika Atsimo Atsinanana. Koa any Afovoany Atsinanana sy Amerika Atsimo. Manana mpiara-miasa sy ny maro ny mpanjifa.
PCB fanamarihana Machine , Environmental Protection Industry, Industrial Inkjet Printer For Bottle, Pencil Engraving Machine, Laser Rust Removal 100w 200w 1000w, Leather Laser sokitra Machine ,
No. 578-3 Yanxin Road, Huishan Economic Development Zone, Wuxi, Jiangsu, Sina